२०७८ श्रावण ११, मंगलवार
२०७१ साल भाद्र २४ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशको तात्कालिक राजनैतिक स्थिति र केन्द्रीय प्रवक्ता समेतसम्बन्धी निर्णयहरूबारे जानकारी गराउन निम्नलिखित वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
संविधानको निर्माणमा गम्भीर बन्दै गएको अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्थाप्रति हाम्रो पार्टीले बारम्बार चिन्ता र असन्तोष प्रकट गर्दै आएको छ र त्यो अवस्था अहिले पनि कायम छ । यो कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छौँ कि एमाओवादी र त्यससित सम्बन्धित मधेशवादी तथा जातिवादीहरूका कारणले नै संविधानको निर्माणमा सबैभन्दा बढी बाधा पुगेको छ । उनीहरूले एकातिर, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधान बन्न नसक्ने अवस्थामा लोकतान्त्रिक संविधान नै बन्न नदिने तथा अर्कातिर, स्वयं प्रचण्डको नेतृत्वमा संविधानको निर्माण समेतकोे कार्यक्षेत्र भएको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन जोड दिने अन्यथा संसद समेत अवरुद्ध गर्ने नीतिका कारणले पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने देखिन्छ । संविधान सभाबाहिर संविधानको निर्माणको कार्यक्षेत्र भएको राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कार्यलाई हाम्रो पार्टीले पूरै गलत ठान्दछ र विरोध गर्दछ । प्रथमताः एमाओवादीसित त्यस प्रकारको नीतिमा सुधार गर्न हामीले आग्रह गर्दछौँ । अन्यथा त्यस प्रकारको नीतिका विरुद्ध संविधान सभाभित्र र बाहिर पनि सशक्त सङ्घर्ष गरेर नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हुन सक्ने छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।
संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा संविधान सभाबाहिर भएका माओवादी सहित राजनैतिक शक्तिहरूलाई सामेल गराउनेबारे राजनैतिक सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । संविधान सभाबाहिरका शक्तिहरूलाई पनि सहभागी गराएर संविधानको निर्माण गर्ने प्रयत्नलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ । त्यसकारण त्यो कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टी जोड दिन्छ । तर संविधानको निर्माणमा अन्तिम भूमिका संविधान सभाको नै हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत छ ।
अपर कर्णाली र विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छन् । उक्त विषयमा पी.टी.ए. र पी.डी.ए. छिट्टै गर्ने र सम्झौता गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर छ । उक्त सम्झौताहरू भएमा देशको राष्ट्रिय हितमा ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । त्यसैले उक्त सम्झौताहरू खारेज गर्न देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो पार्टीले उक्त प्रश्नहरूमा समान दृष्टिकोण राख्ने राजनैतिक सङ्गठनहरूसित संयुक्त आन्दोलन सङ्गठित गर्ने पार्टीको नीति रहेको छ । त्यो आन्दोलनलाई सफल पार्न हामीले सबै जिल्लाका समिति, मोर्चा वा जनवर्गीय सङ्गठन र समर्थकहरूसित अपिल गर्दछौँ ।
बाढी, पहिरोका कारणले ठूलो सङ्ख्यामा जनता पीडित भएका छन् । यसबाट देशमा एक प्रकारले सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसमा सरकारबाट पनि पर्याप्त ध्यान गएको देखिन्न । बाढी पीडितका लागि देशभित्रबाट र बाहिरबाट आएको सहयोगको रकमको पनि पूरै सदुपयोग भएको छैन । बाढी पीडितसम्बन्धी रकमको ठूलो अंश बाढी पीडित समक्ष पुगेको छैन भने त्यो रकममा व्यापक रूपले भ्रष्टाचार पनि हुने सम्भावना देखा परेको छ । त्यो अवस्थामा बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नका लागि पूरा ध्यान दिनका लागि हामीले सरकारसित अनुरोध गर्दछौँ । त्यसका साथै त्यो विषयमा रकममा हुने भ्रष्टाचारमाथि पुरै नियन्त्रण गर्न र त्यसका लागि उठेको रकम बाढी पीडितलाई समुचित रूपले सहयोग सुनिश्चित गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
संविधान सभामा २६ जना मनोनित गर्ने प्रश्नमा धेरै ढिलाइ भएकोमा हाम्रो पार्टीले गम्भीर असन्तोष प्रकट गर्दछ । अहिले केही सदस्यलाई मनोनित गरिएकोमा पनि उनीहरूलाई संविधानको मर्म अनुसार मनोनित गरिएको छैन । त्यो पद्धतिलाई हाम्रो पार्टीले पूरै गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
देशमा भ्रष्टाचार र महङ्गी लगातार बढ्दै गएको छ । त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकार झन् असफल भएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार र महङ्गीविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
पार्टीको प्रवक्ताको काम गर्दै आउनु भएका का. हरि आचार्य अन्य व्यावहारिक कारणले सो जिम्मेवारीबाट हटेकाले उहाँको ठाउँमा का. विमल शर्मालाई केन्द्रीय प्रवक्ताको रूपमा नियुक्त गरिएको छ ।
मिति ः २०७१ भाद्र २४ गते